मे 16, 2019 मे 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक	5 Comments पानी, मोबाइल
मोबाइल आजको युगमा संचारको लागि आवश्यक माध्यम हो । तर कहिलेकाहीँ अचानक मोबाइल फोन पानीमा खसेर बिग्रिन्छ । पानीमा खसेर वा पानी छिरेर मोबाइल बिग्रिएको समस्या त हामीमध्ये धेरैले भोगेका छौँ । पानी छिरेको केही समयमै मोबाइल बिग्रिन्छ र त्यो मोबाइल ठीक हुने सम्भावना अति कम हुन्छ । मोबाइल मात्रै होइन क्यामेरा, ल्यापटप र अन्य विद्युतीय सामानहरु पनि पानीले बिगार्छ । पानीले खास के गर्छ त यस्ता विद्युतीय सामानहरुमा ?
हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, सामान्यतः पानी विद्युतको सूचालक हो । पानीको यही गुणका कारण माछा मार्नको लागि पोखरीमा ‘करेन्ट’ लगाइदिने चलन निकै प्रचलित छ । मोबाइल, क्यामेरा, ल्यापटप जस्ता उपकरणहरु त्यसमा राखिएका ब्याट्रीहरुले प्रदान गर्ने विद्युतीय ऊर्जाका कारण सञ्चालित हुन्छन् । विद्युत खासखास दिशामा प्रवाह हुँदा यी विद्युतीय उपकरणहरुले काम गर्दछन् । तर, यी यन्त्रहरुभित्र पानी छिर्यो भने पानीको कारणले विद्युत प्रवाह हुन नहुने ठाउँहरुमा पनि विद्युत प्रवाह भइदिन्छ । यसले ती यन्त्रहरुलाई स्थायी रुपमा नोक्सान पुर्याउँछ ।
मोबाइलभित्र पानी छिर्दा ब्याट्री तुरुन्त निकालेर मोबाइललाई सुकाउने सल्लाह दिइन्छ किनभने ब्याट्री निकालिसकेपछि मोबाइलभित्र विद्युतीय ऊर्जा प्रदान गर्ने साधन केही पनि नहुने हुँदा पानीले कुनै नोक्सान गर्न पाउँदैन र मोबाईल सुकाएर पुनः ब्याट्री हाल्दा मोबाइलले पहिलेजस्तै काम गर्छ ।
← ज्योतिषशास्त्र अनुसार निधारको साइज हेरेर थाहा हुन्छ तपाई कति भाग्यमानी ?
शास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा पैसा कहिले पनि टिक्दैन →
पानीको कमिले शरीरमा देखिने समस्याहरु
मार्च 24, 2019 मार्च 24, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
स्वस्थ जीवनको लागि कति र कसरी पानी पिउने ?
डिसेम्बर 2, 2018 डिसेम्बर 2, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
5 thoughts on “पानीमा खस्दा वा डुब्दा मोबाइल किन बिग्रिन्छ ?”
Pingback:मोबाइल फोन पानीमा भिजेमा यी उपायहरु अपनाउनुस्
Pingback:मोबाइल एक्कासी बन्द भएमा मोबाइल प्रयोगकर्ताले जान्नैपर्ने ४ कुराहरु
Pingback:कुकुरले बिरालोलाई किन लखेट्छ ?
Pingback:मोबाइल फोन पानीले भिजेमा के गर्ने र के नगर्ने ?
Pingback:मास्टर कार्ड भनेको के हो ? यसका फाइदाहरु के के छन् ? जानी राखौ